Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: OPDO Obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee sabboontota Oromoo gidduutti ilaalchonni 3 waan dhalatan fakkaata.
OPDO Obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee sabboontota Oromoo gidduutti ilaalchonni 3 waan dhalatan fakkaata.
OPDO Obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee sabboontota Oromoo gidduutti ilaalchonni 3 waan dhalatan fakkaata. Ilaalchi tokko, waan OPDOn hojjechaa jirtu tuffachuun sirrii miti, bishaan itti naquu hin qabnu jedha. Ilaalchi kaan ammoo, Lammaan basaasa Wayyaanee hamaa waan taheef arraba damma dibatee caalaatti qabsoo Oromoo ukkaamsuuf hojjechaa jira jechuun dura dhaabbata. Ilaalchi sadaffaan warra dhimmichi harkaa badnaan waan jedhu wallaalee taajjabaa jiruu dha. Inni sadaffaa kun lakkoofsa heddu waan qabu natti fakkaata.
An akka mataa kootti, ejjennoon OPDO Obbo Lammaa Magarsaa irratti qabu akkana. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa kan Oromoon bara dheeraaf dhiheessaa jiru furuuf tarkaanfii tokko tokko fudhatamaa jiru nan deeggara. Keessattuu waan OPDOn godhaa jirtu laalchisee wanni Habashootaa fi Wayyaanota dallansiisu kamuu nabiratti deeggaramaa dha. Garuu tarkaanfii hagasiitiin Oromoo afaan qabnee diddaa ummatichi sirna kana irratti qabu dhaamsina jechuuf moo waan eegalan kana gara sadarkaa guddaatti itti fufu kan jedhu yeroon waan nu agarsiisuuf ammaaf ejjennoo qabachuuf itti jarjaruu hin qabnun jedha. Akkasuu tahee OPDO qeequun itti fufuu qaba. Waan silaa heeraan dhaabsisuu dandeessu hedduutu Oromoo irratti dalagamaa jira, kanaaf OPDOn gaafatama jalaa hin baatu.
OPDOn yoo dhuguma AKKA DHAABAATTI sabboonummaa magarfataa dhufaa jiraatteef maal faa gochuu akka qabdu itti himnee waan isiin jettu haa laallu. ''Warraaqsa dinagdee'' jechuun wacuu caalaa warraaqsa siyaasaa yoo dursite isii amanna. Fakkeenyaaf, akkuman yeroo dabre jedhe, aangoo siyaasaa fi waraanaa kan Oromoof quuqama qabu, kan wayyabummaa Oromootiin gitu akka heera biyyattiitti dhugoomfachuuf haa socho'anu. Yoo san irraa eegalan qofa sabboonummaan isaanii amanamaa deemuu danda'a. Akka amma jiru kanatti garuu Wayyeeneen dhaamsa sakoondii 30tiin waan hunda dhaabsisuu dandeessi. Aaangoon ittiin Wayyaanee of irraa dhiibanii ofiin of bulchanii fi Oromoo qabeenya isaatiin duroomsan aangoo siyaasaa fi humna ittisaa wayyabummaa ummatichaatiin gitu dhugoomfachuu qofa. Yoo akkas tahe qofa qajeelfama faallaa kan gubbaa irraa gad itti dhufu ofirraa qolachuun danda'ama.
Posted by Hasan Ismail at 6:25 AM